DIY माइक्रोमिटर स्टीरियो एफएम ट्रांसमिटर - CZH / Fmuser एफएम ट्रांसमीटर चीन आपूर्तिकर्ता सम्पर्क: lanyue whatsapp: +86 13602420401 SKYPE: lanyue99991
घर » DIY माइक्रोमिटर स्टीरियो एफएम ट्रांसमिटर
अन्त्यमा - एक स्टेरियो एफएम ट्रांसमिटर त्यो प .्क्तिबद्ध गर्न स्नैक हो।
यो नयाँ स्टेरियो एफएम माइक्रोमिटर लगभग २० मिटरको दायरामा राम्रो गुणको संकेतहरू प्रसारण गर्न सक्षम छ। यो सीडी प्लेयर वा कुनै अन्य स्रोतबाट संगीत प्रसारणको लागि आदर्श हो कि यसलाई अर्को स्थानमा लिन सकिन्छ।
उदाहरण को लागी, यदि तपाईं कार मा एक सीडी प्लेयर छैन भने, तपाईं एक पोर्टेबल सीडी प्लेयर बाट तपाईंको कारको रेडियोमा संकेत प्रसारण गर्न micromitter प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं माइक्रोमिटर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको घरको कोठाको सीडी प्लेयरबाट घरको अर्को भागमा वा पोखरीमा रहेको एफएम रिसीभरमा संकेत प्रसारण गर्नका लागि।
किनकि यो एकल आईसीमा आधारित छ, यो एकाई निर्माण गर्न स्नैक्स हो र सजिलै सानो प्लास्टिक उपयोगिता बक्समा फिट हुन्छ। यसले एफएम ब्यान्डमा प्रसारण गर्दछ (जस्तै, -88 108-१०XNUMX मेगाहर्ट्ज) ताकि यसको संकेत कुनै पनि मानक एफएम ट्युनर वा पोर्टेबल रेडियोमा प्राप्त गर्न सकिन्छ।
यद्यपि, SILICON CHIP मा प्रकाशित अघिल्लो FM ट्रान्समिटरहरूको विपरीत, यो नयाँ डिजाइन एफएम प्रसारण ब्यान्डमा लगातार परिवर्तनशील हुँदैन। यसको सट्टा, 4-वे DIP स्विच १ 14 पूर्वसेट फ्रिक्वेन्सीहरू मध्ये एक चयन गर्न प्रयोग गरिन्छ। यी दुई दायरामा .87.7 88.9..106.7--.107.9..0.2 मेगाहर्ट्ज र १०XNUMX.-XNUMX-१०XNUMX..XNUMX मेगाहर्ट्जबाट ०.० मेगाहर्ट्ज चरणमा कभरेजमा उपलब्ध छन्।
कुनै ट्यूनि co कुण्डलहरू छैनन्
चित्र १: रोहम BH1F स्टेरियो एफएम ट्रांसमिटर आईसी को ब्लक आरेख। यो पाठले कसरी कार्य गर्दछ भनेर वर्णन गर्दछ।
सिलिकॉन चिपमा अक्टूबर १ 1988 2001 first मा हामीले पहिलो पटक एफएम स्टेरियो ट्रान्समिटर प्रकाशित गर्यौं र अप्रिल २००१ मा नयाँ संस्करणको साथ यसको अनुसरण गर्‍यौं। मिनीमिटर डब गरेपछि यी पहिलेका संस्करणहरू लोकप्रिय रोहम बीए १1404०XNUMX आईसीमा आधारित थिए जुन अब उत्पादन गरिएको छैन।
यी दुबै युनिटहरूमा, पign्क्तिबद्ध प्रक्रियामा दुई कुण्डली (एक थरथर काण्ड र फिल्टर कोइल) भित्र फेराइट ट्युनिंग स्लगहरूको सावधानीपूर्वक समायोजन आवश्यक छ, ताकि आरएफ आउटपुट एफएम रिसीभरमा चयन गरिएको फ्रिक्वेन्सीसँग मेल खान्छ। यद्यपि, केहि कन्स्ट्रक्टरहरूलाई यससँग कठिनाई थियो किनभने समायोजन एकदम संवेदनशील थियो।
विशेष रूपमा, यदि तपाईंसँग डिजिटल (जस्तै, संश्लेषित) एफएम रिसीभर छ भने, तपाईंले एक निश्चित फ्रिक्वेन्सीमा रिसीभर सेट गर्नुपर्दछ र त्यसपछि सावधानीपूर्वक ट्रान्समिटर फ्रिक्वेन्सी "यस मार्फत" ट्युन गर्नुपर्दछ। थप रूपमा, ओसिलेटर र फिल्टर कुण्ड समायोजन बीचमा केहि कुराकानी भएको थियो र यसले केही मानिसहरूलाई अलमल्लमा पारेको थियो।
त्यो समस्या यस नयाँ डिजाइनमा अवस्थित छैन, किनकि त्यहाँ कुनै फ्रिक्वेन्सी पign्क्तिबद्ध प्रक्रिया छैन। यसको सट्टामा, तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको ट्रान्समिटर फ्रिक्वेन्सी सेट गर्नुपर्दछ way-वे DIP स्विच प्रयोग गरेर र त्यसपछि तपाईंको FM ट्युनरमा प्रोग्राम गरिएको फ्रिक्वेन्सी डायल-अप गर्नुहोस्।
त्यस पछि, यो ट्रान्समिटर सेटअप गर्दा एकल कुण्डल समायोजन गर्ने कुरा हो, सही आरएफ अपरेशनको लागि सेट गर्न।
नयाँ एफएम स्टेरियो माइक्रोमिटर अब क्रिस्टल-लक छ जसको मतलब इकाई समयसँगै फ्रिक्वेन्सी बन्द गर्दैन। थप रूपमा, विरूपण, स्टेरियो सेपरेसन, सिग्नल-देखि-शोर रेशियो र स्टेरियो लक गर्दै यस नयाँ इकाईमा पहिलेका डिजाइनहरूको तुलनामा धेरै सुधार गरिएको छ। विशिष्टता प्यानलमा थप विवरणहरू छन्।
चित्र २: यो आवृत्ति बनाम आउटपुट स्तर प्लटले समग्र स्तर (पिन)) देखाउँदछ। करीव kkHz मा 2ms पूर्व जोर प्रतिक्रिया मा वृद्धि को कारण, जबकि 5kHz कम पास रोल अफ 50kHz माथि प्रतिक्रिया मा गिरावट उत्पादन गर्दछ।
नयाँ डिजाइनको मुटुमा BH1417F FM स्टीरियो ट्रान्समिटर आईसी Rhom निगम द्वारा बनाईएको छ। पहिले नै उल्लेख गरिए अनुसार, यसले BA1404 खोज्नको लागि अहिलेको हार्डलाई प्रतिस्थापन गर्दछ जुन अघिल्लो डिजाइनहरूमा प्रयोग गरिएको थियो।
चित्र १ ले BH1F को आन्तरिक सुविधाहरू देखाउँदछ। यसमा स्टेरियो एफएम प्रसारणको लागि आवश्यक सबै प्रसंस्करण सर्किटरी र क्रिस्टल नियन्त्रण सेक्सन पनि समावेश छ जुन सटीक फ्रिक्वेन्सी लकिking प्रदान गर्दछ।
देखाइएको अनुसार, BH1417F ले दुई अलग अडियो प्रशोधन सेक्सनहरू, बायाँ र दायाँ च्यानलहरूको लागि समावेश गर्दछ। बाँया-च्यानल अडियो स signal्केत चिन्ह चिपको २२ पिनमा लागू गरिन्छ, जबकि दायाँ च्यानल संकेत पिन १ मा लागू गरिन्छ। यी अडियो संकेतहरू त्यसपछि प्री-जोर सर्किटमा लागू हुन्छन् जसले ती फ्रिक्वेन्सीहरूलाई ms०ms समय स्थिर (जस्तै, प्रसारण हुनुभन्दा अघि ती फ्रिक्वेन्सीहरू 22.१k1kHz) माथि।
सामान्यतया, पूर्व-जोर प्राप्त FM संकेत को संकेत-देखि-आवाज अनुपात सुधार गर्न प्रयोग गरीन्छ। यो रिडिभरमा पूरक डी-जोर सर्किटको प्रयोग गरेर डेमोडुलेसन पछि बढाएको ट्रबल फ्रिक्वेन्सीहरूलाई कम गर्न कार्य गर्दछ, ताकि फ्रिक्वेन्सी प्रतिक्रिया सामान्यमा पुनर्स्थापित हुन्छ। एकै समयमा, यसले पनि हिसहरू लाई घटाउँछ जुन अन्यथा संकेतमा स्पष्ट हुन्छ।
पूर्व-जोडको राशि पिन २ र २१ मा जडान भएका क्यापेसिटरको मूल्यबाट सेट हुन्छ (नोट: समय स्थिर मान = २२..2kΩ x capacitance मान)। हाम्रो केसमा हामी २.२ एनएफ कप्यासिटरहरू प्रयोग गर्छौं emphasis०μ को पूर्व-जोर सेट गर्न जुन अष्ट्रेलियाई एफएम मानक हो।
सिग्नल सीमित पनि पूर्व-जोर सेक्सन भित्र प्रदान गरियो। यसले निम्न चरणहरूको ओभरलोडिंग रोक्नको लागि निश्चित सीमा भन्दा माथि संकेतहरू समावेश गर्दछ। फलस्वरूप अधिक मोडुलन रोक्छ र विकृति कम गर्दछ।
बाँया र दायाँ च्यानलहरूका लागि पूर्व-जोडिएका स्केतहरू त्यसपछि दुई कम-पास फिल्टर (LPF) चरणहरू मार्फत प्रशोधन गरिन्छ, जुन १kkHz माथि प्रतिक्रिया बन्द गर्दछ। यो रोल अफ एफएम संकेतको ब्यान्डविथ प्रतिबन्ध गर्न आवश्यक छ र समान प्रसारण सीमा वाणिज्य प्रसारण एफएम ट्रान्समिटरहरू द्वारा प्रयोग गरिन्छ।
छवि .3: कम्पोजिट स्टेरियो एफएम संकेतको फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम। 19kHz मा पायलट टोनको स्पाइक नोट गर्नुहोस्।
बाँया र दायाँ LPFs बाट आउटपुटहरू बदले मल्टिप्लेक्स (MPX) ब्लकमा लागू हुन्छ। यो प्रभावी रूपमा योग (बायाँ प्लस दायाँ) र भिन्नता (बायाँ - दायाँ) स produce्केतहरू उत्पादन गर्न प्रयोग गरिन्छ जुन k 38kHz वाहकमा परिमार्जित हुन्छ। वाहकलाई तब दबाईन्छ (वा हटाइएको) एक डबल-साइडब्यान्ड सप्रेस क्यारियर संकेत प्रदान गर्न। यो पिन at मा समग्र संकेत आउटपुट (पूर्ण स्टीरियो एन्कोडि withको साथ) दिनको लागि १ kkHz पायलट टोनको साथ संक्षेप (+) ब्लकमा मिश्रित हुन्छ।
१ k केएचजेट पायलट टोनको चरण र स्तर पिन १ at मा क्यापेसिटर प्रयोग गरेर सेट गरियो।
छवि .3 ले कम्पोजिट स्टेरियो संकेतको स्पेक्ट्रम देखाउँदछ। (L + R) संकेतले ०-१-0kHz बाट फ्रिक्वेन्सी दायरा कब्जा गर्दछ। यसको विपरित रूपमा, डबल साइडब्यान्ड सप्रेस क्यारियर संकेत (LR) सँग तल्लो साइडब्यान्ड छ जुन २-15--23kHz र side 38--38kHz बाट माथिल्लो साइडब्यान्ड हो। उल्लेख गरिए अनुसार, k 53kHz क्यारियर अवस्थित छैन।
१ kkHz पायलट टोन अवस्थित छ, तथापि, र यो FM रिसीभरमा kkkHz subcarrier को पुन: संरचना गर्न प्रयोग गरिन्छ ताकि स्टेरियो संकेत डिकोड गर्न सकीन्छ।
38kHz मल्टिप्लेक्स सिग्नल र 19kHz पायलट टोन पिन १ at र १ at मा स्थित .7.6..13 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल oscillator लाई विभाजित गरेर उत्पन्न गरिएको हो। फ्रिक्वेन्सी पहिलो १.14MHz प्राप्त गर्न चारले विभाजित गर्दछ र 1.9०kHz प्राप्त गर्न by० बाट विभाजित गर्दछ। यो १ kkHz पायलट टोन निकाल्न दुईले दुई भाग गरीन्छ।
थप रूपमा, १. 1.9 मेगाहर्ट्ज सिग्नल १ by को साथ १००kHz संकेत दिन विभाजित छ। यो संकेत फेज डिटेक्टरमा लागू हुन्छ जसले कार्यक्रम काउन्टर आउटपुटलाई पनि अनुगमन गर्दछ। यो कार्यक्रम काउन्टर वास्तवमा एक प्रोग्राम डिभाइडर हो जसले आरएफ संकेतको विभाजित डाउन मान दिन्छ।
यस काउन्टरको भाग अनुपात भोल्टेज स्तरहरू आगत D0-D3 (पिन १ 15-१-18) मा सेट गर्दछ। उदाहरण को लागी, जब D0-D3 सबै कम हुन्छ, तब प्रोग्रामेबल काउन्टर 877 ले भाग गर्दछ। यसैले, यदि RF oscillator .87.7 100.M MHz मा चलिरहेको छ भने, काउन्टरबाट विभाजित आउटपुट १००kHz हुनेछ र यो .7.6..7.6 MHz बाट विभाजित फ्रिक्वेन्सीसँग मेल खान्छ। क्रिस्टल थरथरानवाला (जस्तै, .4..19 मेगाहर्ट्ज by लाई १ XNUMX द्वारा विभाजित गरिएको छ)।
फिगर:: स्टेरियो एफएम माइक्रोमिटरको पूर्ण सर्किट। DIP स्विच S4-S1 आरएफ थरथरता फ्रिक्वेन्सी सेट गर्दछ र यो PL4 आउटपुट द्वारा IC7 को पिन at मा नियन्त्रण गरिन्छ। यस आउटपुट Q1 लाई ड्राइभ गर्छ जुन बदल्दै VC1 मा यसको नियन्त्रणमा भोल्टेजमा नियन्त्रण भोल्टेज लागू गर्दछ। पिन at मा समग्र अडियो आउटपुट आवृत्ति मोडुलन प्रदान गर्दछ।
अभ्यासमा, पिन at मा चरण डिटेक्टर आउटपुटले एक varicap डायोडमा लागू भोल्टेज नियन्त्रण गर्न त्रुटि संकेत उत्पन्न गर्दछ। यो भेरिक्याप डायोड (VC7) मुख्य सर्किट आरेख (चित्र)) मा देखाइएको छ र पिन at मा आरएफ थरथरिका अंश बनाउँदछ। यसको दोभाईको फ्रिक्वेन्सी इन्डक्टन्सको मान र कुल समानान्तर समाई निर्धारित गर्दछ।
भेरिक्याप डायोडले यस क्यापिसिटन्सको अंश बनाएको हुनाले हामी आरएफ थरथरता फ्रिक्वेन्सीलाई यसको मान परिवर्तन गरेर बदल्न सक्दछौं। अपरेशनमा, भेरिक्याप डायोडको क्यापेसिटन्स पीएलएल चरण डिटेक्टरको आउटपुट द्वारा यसलाई लागू गरिएको डीसी भोल्टेजको अनुपातमा भिन्न हुन्छ।
अभ्यासमा, चरण डिटेक्टरले varicap भोल्टेज समायोजित गर्दछ ताकि विभाजित RF थरथरता आवृत्ति प्रोग्राम काउन्टर आउटपुटमा १००kHz छ। यदि आरएफ फ्रिक्वेन्सी उच्च बग्छ भने, प्रोगेमेबल डिभाइडरबाट फ्रिक्वेन्सी आउटपुट बढ्दछ र चरण डिटेक्टरले क्रिस्टल डिभिजनद्वारा प्रदान गरिएको यस र १००kHz बीचमा त्रुटि "देख्दछ"।
नतिजाको रूपमा, चरण डिटेक्टरले भेरिक्याप डायोडमा लागु डीसी भोल्टेज कम गर्दछ, जसले गर्दा यसको समाई क्षमता बढाउँदछ। र यसले बारीमा ओस्किलेटर फ्रिक्वेन्सी घटाउँछ यसलाई "लक" मा फेरि ल्याउन।
यसको विपरित रूपमा, यदि आरएफ फ्रिक्वेन्सी कम खस्कन्छ भने, प्रोग्रामयोग्य डिभाइडर आउटपुट १०० केएचझेड भन्दा कम हुनेछ। यसको मतलब यो छ कि चरण डिटेक्टरले अब लागू डीसी भोल्टेज भेरिक्यापमा बढाउँछ यसको क्षमता घट्न र आरएफ फ्रिक्वेन्सी बढाउन। नतिजाको रूपमा, यस PLL फीडबैक व्यवस्थाले सुनिश्चित गर्दछ कि प्रोग्रामयोग्य डिभाइडर आउटपुट १००kHz मा स्थिर छ र यसरी RF थरथरता स्थिरता सुनिश्चित गर्दछ।
प्रोग्रामयोग्य डिभाइडर परिवर्तन गरेर हामी आरएफ फ्रिक्वेन्सी परिवर्तन गर्न सक्दछौं। त्यसो भए, उदाहरणको लागि, यदि हामी १०1079 to लाई डिभाइडर सेट गर्छौं भने, आरएफ थरथरिका १०107.9..100 मेगाहर्ट्जमा अपरेट गर्नै पर्छ प्रोग्रामेबल डिभाइडर आउटपुट १००kHz मा रहनका लागि।
अवश्य पनि, अडियो जानकारी प्रसारण गर्नका लागि, हामीले RF थरथरता मोडुलन गर्न आवश्यक छ। हामी पिन at मा कम्पोजिट सिग्नल आउटपुट प्रयोग गरी भेरिकाप डायोडमा भोल्टेजलाई परिमार्जन गरेर गर्छौं।
नोट गर्नुहोस्, यद्यपि, RF थरथर (औसत वाहक फ्रिक्वेन्सी) को औसत आवृत्ति स्थिर रहन्छ, प्रोग्राम डिभाइडर (वा प्रोग्राम काउन्टर) द्वारा सेट गरे अनुसार। नतिजाको रूपमा, प्रसारित एफएम संकेत क्यारियर फ्रिक्वेन्सीको दुबै छेउमा भिन्न हुन्छ कम्पोजिट स level्केत स्तरको अनुसार - अर्थात्, यो फ्रिक्वेन्सी परिमार्जित हुन्छ।
ब्यान्डपास फिल्टर विकल्प
हामीले पीसी बोर्ड डिजाईन गरेका छौं कि यसले आईसी १ को पिन ११ आरएफ आउटपुटमा भिन्न ब्यान्डपास फिल्टर स्वीकार गर्न सक्छ। यो फिल्टर Soshin इलेक्ट्रॉनिक्स कं द्वारा बनाईएको छ र GFWB11 लेबल गरिएको छ। यो सानो 1-टर्मिनल प्रिन्ट गरिएको ब्यान्डपास फिल्टर हो र -3 3-१०76 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा अपरेट गर्दछ।
यस फिल्टर प्रयोगको फाइदा यो हो कि यसमा FM ब्यान्डको मुनि र तल धेरै स्टीपर रोल अफ छ। यसले अन्य फ्रिक्वेन्सीहरूमा कम साइडब्यान्ड हस्तक्षेपमा परिणाम दिन्छ। दोष यो हो कि फिल्टर प्राप्त गर्न धेरै गाह्रो छ।
अभ्यासमा, फिल्टरले पीसी बोर्ड अर्थमा जडान हुने फिल्टरको केन्द्रीय धरती टर्मिनलको साथ p ppF कपिसिटर प्रतिस्थापन गर्दछ। यसैले त्यहाँ 39pF कप्यासिटर लिड्स बीच एक प्वाल छ। P p पीएफ र 39 पीएफ कप्यासिटरहरू र n 39 एनएच र 3.3० एनएच इन्डेक्टरहरू आवश्यक पर्दैन, जबकि n 68nH इन्डक्टर एक तार लिंकको साथ प्रतिस्थापित भयो।
चित्र ((ए): यो रेखाचित्रले पीसी बोर्डको तामाको छेउमा कसरी चार सतह माउन्ट भागहरू स्थापना भएको देखाउँदछ। निश्चित गर्नुहोस् कि IC5 र VC1 सही रूपमा अभिमुख छन्।
स्टेरियो एफएम माइक्रोमिटरको पूर्ण सर्किटको लागि अब फिगर .4 मा हेर्नुहोस्। अपेक्षित रूपमा, आईसी १ ले एफएम स्टीरियो ट्रान्समिटर पूरा गर्न थप केही कम्पोनेन्टहरू थपेर सर्किटरीको मुख्य भाग बनाउँछ।
बाँया र दायाँ अडियो इनपुट स्केतहरू १μF द्विध्रुवीय क्याप्यासिटरहरू मार्फत खुवाइन्छ र त्यसपछि १०kΩ फिक्स्ड रेसिस्टरहरू र १०kΩ ट्रिमपॉटहरू (VR1 र VR10) समावेशी एटेन्युएटर सर्किटमा लागू गरिन्छ। त्यहाँबाट, संकेतहरू 10μF इलेक्ट्रोलाइटिक क्यापेसिटरहरू मार्फत आईसी 1 को पिन2र २२ मा मिलाउँछन्।
नोट गर्नुहोस् कि १μF द्विध्रुवीय कप्यासिटरहरू डीसी वर्तमान प्रवाह रोक्नको लागि सिग्नल स्रोत आउटपुटमा कुनै पनि डीसी अफसेटहरूको कारण समावेश गरिएको छ। यसै गरी, पिन १ र २२ मा १μF क्यापेसिटरहरू ट्रिमपॉटहरूमा डीसी प्रवाह रोक्न आवश्यक छ, किनकि यी दुई इनपुट पिन आधा आपूर्तिमा पक्षपाती छन्। यो आधा आपूर्ति रेल आईसी १ को पिन at मा १०μF क्यापेसिटर प्रयोग गरेर डाउपल गरियो।
२.२ एनएफ प्री-जोर क्यापेसिटरहरू पिन २ र २१ मा छन्, जबकि १p०pF कापेसिटरहरू पिन & र २० मा कम-पास फिल्टर रोल अफ पोइन्ट सेट गर्दछ। पायलट स्तर पिन १ at मा क्यापेसिटरको साथ सेट गर्न सकिन्छ - यद्यपि यो सामान्यतया आवश्यक पर्दैन किनकि स्तर सामान्यतया क्यापेसिटर थप नगरी धेरै नै उपयुक्त हुन्छ।
वास्तवमा यहाँ क्यापेसिटर थपेमा मात्र स्टेरियो बिभाजन कम हुन्छ किनकि पायलट टोन चरण 38kHz मल्टिप्लेक्स दरको तुलनामा बदलिएको हुन्छ।
.7.6..7.6 मेगाहर्ट्ज ओसिलेटर पिन १ & र १ between को बीचमा .13.stal मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल जडान गरेर गठन गरिएको हो। अभ्यासमा यो क्रिस्टल आन्तरिक इन्भर्टर चरणसँग समानान्तर जडित छ। क्रिस्टल दोलन को फ्रिक्वेन्सी सेट गर्दछ, जबकि 14pF कप्यासिटर सही लोडिंग प्रदान गर्दछ।
छवि ((बी): यहाँ प्लगप्याक-संचालित संस्करण निर्माण गर्न पीसी बोर्डको माथि भागहरू कसरी स्थापना गर्ने भनेर छ। नोट गर्नुहोस् कि आईसी १, वीसी १ र n5एनएच र 1० एनएच प्रेरकहरू सतह माउन्ट उपकरणहरू हुन् र बोर्डको तामा पक्षमा माउन्ट गरिएका छन् जुन चित्र ((ए) मा देखाइएको छ।
प्रोग्रामेबल डिभाइडर (वा प्रोग्राम काउन्टर) पिन १ 15, १,, १ & र १ D (D16-D17) मा स्विचको प्रयोग गरेर सेट गरिएको छ। यी इनपुटहरू सामान्यतया १०kΩ प्रतिरोधकहरू मार्फत माथि राखिन्छ र स्विचहरू बन्द हुँदा कम तानिन्छ। तालिका १ ले देखाउँदछ कि स्विचहरू १ 18 बिभिन्न प्रसारण फ्रिक्वेन्सीहरू मध्ये कुनै एक छनौट गर्न कैसे सेट गरियो।
आरएफ ओसिलेटर आउटपुट पिन at मा छ। यो एक कोलपिट्स थरथरानवाला हो र इन्डक्टर एल १, p 9pF र २२pF निश्चित क्यापेसिटरहरू र भेरिक्याप डायोड VC1 प्रयोग गरेर ट्यून गरिएको छ।
P 33 पीएफ स्थिर क्यापेसिटरले दुई कार्यहरू गर्दछ। पहिले, यसले LC मा प्रवाहित हुन रोक्न VC1 मा लागु DC DC भोल्टेज रोक्दछ। र दोस्रो, किनभने यो VC1 को साथ श्रृंखलामा छ, यसले भेरिक्याप क्यापिसिटनमा परिवर्तनको प्रभावलाई कम गर्दछ, पिन by द्वारा "देखिएको" जस्तो।
यसले, बारीमा, भेरिकाप नियन्त्रण भोल्टेजमा परिवर्तनको कारण आरएफ थरथरिकाको समग्र आवृत्ति दायरा कम गर्दछ र राम्रो चरण लक लूप नियन्त्रणलाई अनुमति दिन्छ।
त्यस्तै, १०pF कप्यासिटरले DC current लाई पिन L बाट L10 मा प्रवाहलाई रोक्दछ। यसको कम मूल्यको मतलब यो पनि छ कि ट्युन गरिएको सर्किट केवल ढीला युग्मित छ र यसले ट्युन गरिएको सर्किटको लागि उच्च Q कारक र ओसिलेटरको सजिलो सुरूवात गर्न अनुमति दिन्छ।
थरथर थरीकरण मोडि गर्दै
चित्र:: यहाँ छ कि ब्याट्री द्वारा संचालित संस्करणको लागि बोर्डलाई कसरी परिमार्जन गर्ने। यो D6, ZD1 र REG1 छोड्ने र वायर लिंकहरूको एक जोडी स्थापनाको मात्र कुरा हो।
कम्पोजिट आउटपुट सिग्नल पिन at मा देखा पर्दछ र १०μFF क्यापेसिटर मार्फत ट्रिमपट VR5 लाई खुवाउँदछ। यो ट्रिम्पोटले मोडुलन गहराई सेट गर्दछ। त्यहाँबाट, attenuated संकेत अर्को 10μF कप्यासिटर र दुई 3kΩ प्रतिरोधकहरू varicap डायोड VC10 मा खुवाइन्छ।
पहिले उल्लेख गरिएझैं, चरण lo लक लूप नियन्त्रण (PLL) आउटपुट पिन at मा क्यारियर फ्रिक्वेन्सी नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ। यस आउटपुटले उच्च-बढि डार्लिंगटन ट्रान्झिस्टर क्यू १ ड्राइभ गर्दछ र यसले, VC7 मा दुई 1kΩ श्रृंखला रेसिस्टरहरू र १०kΩ पृथक प्रतिरोधक मार्फत नियन्त्रण भोल्टेज लागू गर्दछ।
दुई 2.2..3.3 केΩ प्रतिरोधकको संगममा २.२ एनएफ कप्यासिटरले उच्च आवृत्ति फिल्टरि provides प्रदान गर्दछ।
थप फिल्टरिंग १००μ एफ कप्यासिटर र १००Ω रेसिस्टर द्वारा प्रदान गरिएको छ जुन Q100 को आधार र कलेक्टर बीचको श्रृंखलामा जडित छ। १००Ω रेसिस्टरले ट्रान्जिस्टरलाई ट्रान्जियन्ट परिवर्तनहरूको जवाफ दिन मद्दत गर्दछ, जबकि १००μF कप्यासिटरले कम आवृत्ति फिल्टरि provides प्रदान गर्दछ। थप उच्च आवृत्ति फिल्टरिंग Q100 को आधार र सor्ग्रहकर्ता बीच सिधा जडित connected 1nF संधारित्र द्वारा प्रदान गरिएको हो।
V.१ केΩ प्रतिरोधक V वी रेलमा जोडिएको छ जसले कलेक्टर लोड प्रदान गर्दछ। ट्रान्जिस्टर बन्द हुँदा यो प्रतिरोधकर्ताले Q5.1 को कलेक्टर उच्च तान्दछ।
परिमार्जित आरएफ आउटपुट पिन ११ मा देखा पर्दछ र निष्क्रिय LC ब्यान्डपास फिल्टरमा खुवाइन्छ। यसको काम भनेको मोडुलन र आरएफ थरथर आउटपुटमा उत्पादित कुनै पनि हार्मोनिक्स हटाउनु हो। सामान्यतया, फिल्टरले -11 88-१०108 मेगाहर्ट्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सीहरू पास गर्दछ तर यस भन्दा माथि र तल संकेत फ्रिक्वेन्सीहरू रोल्दछ।
फिल्टरसँग ΩΩΩ को नाम मात्रको प्रतिबन्ध छ र यसले दुबै आईसी १ को पिन ११ आउटपुट र निम्न एटेनुएटर सर्किटसँग मेल खान्छ।
दुई Ω Ω Ω श्रृंखला रेसिस्टरहरू र W 39 डब्लु शन्ट रेसिस्टर एटेन्युएटर बनाउँछन् र यसले एन्टेनामा संकेत स्तर कम गर्दछ। यस एटेन्युएटरले यो सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ कि ट्रान्समिटर 56 allowW को कानूनी अनुमतियोग्य सीमामा संचालित छ।
चित्र .7: यो रेखाचित्रले कुण्डल L1 का लागि घुमाउरो विवरणहरू देखाउँदछ। पूर्वलाई छोट्याउनुपर्नेछ कि यो बोर्ड सतह भन्दा १mm मिलिमिटर भन्दा बढीमा बस्दैन। सिलिकॉन सीलेन्ट प्रयोग गरी पुरानो ठाउँमा होल्ड गर्न, आवश्यक भएमा।
सर्किटको लागि पावर या त 9-16V DC प्लगप्याक वा 6V ब्याट्रीबाट उत्पन्न भएको हो।
प्लगप्याक आपूर्तिको मामलामा, पावर अन / अफ स्विच S5 र डायोड D1 मार्फत खुवाइन्छ जुन रिभर्स पोलरिटी सुरक्षा प्रदान गर्दछ। ZD1 ले सर्किटलाई उच्च-भोल्टेज ट्रान्जियन्टहरू बिरूद्ध संरक्षण गर्दछ, जबकि नियामक REG1 ले सर्किट पावर गर्नको लागि स्थिर + VV रेल प्रदान गर्दछ।
वैकल्पिक रूपमा, ब्याट्री अपरेशनका लागि, ZD1, D1 र REG1 प्रयोग हुँदैन र D1 र REG1 का लागि जडानहरू सर्ट गरिएका छन्। आईसी 1 को लागी निरपेक्ष अधिकतम आपूर्ति 7V हो, त्यसैले 6V ब्याट्री अपरेशन उपयुक्त छ; जस्तै x x एएए सेलहरू x x एएए होल्डरमा।
एकल पीसी बोर्डले 06112021१११२०२१ कोड गरीएको छ र 78 50 x 83० मिमी नाप्ने माइक्रोमिटरको लागि सबै भागहरू समात्दछ। यो x 54 x x 30 x mm० मिमी नाप्ने प्लास्टिकको केसमा राखिएको छ।
पहिले, जाँच गर्नुहोस् कि पीसी बोर्ड केसमा राम्रोसँग फिट छ। बक्समा कुना पिलरहरूमा फिट हुन कुनामा आकारहरू आवाश्यक हुन सक्छ। त्यो भएपछि, जाँच गर्नुहोस् कि DC सॉकेट र आरसीए सकेट पिनका लागि प्वालहरू सही आकार हुन्। यदि L1 को पूर्व मा आधार छैन (तल हेर्नुहोस्), यो एक प्वाल मा धकेले माउन्ट गरिएको छ कि बस यो ठाँउमा राख्नको लागि पर्याप्त कसरत छ। जाँच गर्नुहोस् कि यो प्वालमा सहि व्यास छ।
फिगर .5 (ए) र चित्र ((बी) भागहरू कसरी पीसी बोर्डमा माउन्ट गरिएको छ भनेर देखाउँदछ। पहिलो काम भनेको पीसी बोर्डको तामाको छेउमा धेरै सतह माउन्ट कम्पोनेन्टहरू स्थापना गर्नु हो। यी भागहरूमा आईसी १, वीसी १ र दुई इन्डक्टरहरू सामेल छन्।
तपाइँलाई एक राम्रो-टिप टिलि sold गर्ने फलाम, चिमटी, कडा प्रकाश र यस कामका लागि आवर्धक शीशा चाहिन्छ। विशेष रूपमा, सोल्डरिंग फलामको टिपलाई यो एउटा साँघुरो पेचकस आकारमा फाइल गरेर परिमार्जन गर्नुपर्नेछ।
सबै भन्दा पहिले चार सतह माउन्ट भागहरू स्थापना गर्न उत्तम छ (आईसी सहित), पीसी बोर्डको माथि बाँकी भागहरू स्थापना गर्नु अघि। कसरी क्रिस्टल को शरीर को लागी दुई जोडिएको 10kΩ प्रतिरोधकहरु (बायाँ फोटो) भर पर्छ।
आईसी १ र भेरिक्याप डायोड (VC1) ध्रुवीकरण गरिएको उपकरण हो, त्यसैले उनीहरूलाई ओभरलेमा देखाईएको जस्तै दिशा पक्का गर्नुहोस्। प्रत्येक भाग चिमटाहरूको साथ ठाउँमा राखेर यो स्थापित हुन्छ र त्यसपछि एउटा लीड (वा पिन) पहिले सोल्डरिंग गरेर। त्यो भयो, जाँच गर्नुहोस् कि कम्पोनेन्ट ठीकसँग पोष्ट गरिएको छ बाँकी लीड (हरू) सावधानीपूर्वक सोल्डर गर्नु अघि।
आईसीको मामलामा, पहिले पीसी बोर्डमा राख्नु अघि यसको प्रत्येक पिनको अन्डरसाइडमा हल्का साघुँरो टिन गर्नु उत्तम हुन्छ। यो त्यस ठाउँमा सोल्डरिंग फलामको टिपको साथ प्रत्येक सिसालाई तताउने कुरा मात्र हो।
यस कामको लागि बलियो प्रकाश र म्याग्निफाइ glass ग्लास प्रयोग गर्न नबिर्सनुहोस्। यसले केवल काम सजिलो बनाउँदैन, तर तपाईलाई प्रत्येक जडान जाँच्न पनि अनुमति दिनेछ जस्तो कि यो बनेको छ। विशेष रूपमा, निश्चित गर्नुहोस् कि त्यहाँ नजिकको ट्र्याकहरू वा आईसी पिनहरू बीच कुनै शर्टहरू छैनन्।
अन्तमा, तपाईको मल्टिमिटर प्रयोग गरी जाँच गर्नुहोस् कि प्रत्येक पिन वास्तवमै पीसी बोर्डमा सम्बन्धित ट्र्याकमा जोडिएको छ।
बाँकी भागहरू सबै पीसी बोर्डको माथिल्लो साइडमा सामान्य ढ in्गले माउन्ट गरिएको छ। यदि तपाईं प्लगप्याक-संचालित संस्करण निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भने, चित्र in मा देखाइएको ओभरले रेखाचित्र अनुसरण गर्नुहोस्। वैकल्पिक रूपमा, ब्याट्री संचालित संस्करणको लागि, ZD5 र DC सॉकेट छोड्नुहोस् र D1 र REG1 लाई तार लिंकको साथ प्रतिस्थापन गर्नुहोस्।
रेसिस्टर्स र तार लिंकहरू स्थापना गरेर शीर्ष असेंबली सुरू गर्नुहोस्। तालिका ले रेसिस्टर रंग कोड देखाउँदछ तर हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं कि मानहरू जाँच गर्न तपाईं डिजिटल मल्टिमिटर प्रयोग गर्नुहोस्। नोट गर्नुहोस् कि धेरै जसो प्रतिरोधकर्ताहरू स्पेस बचत गर्न एन्ड-अन माउन्ट छन्।
एक पटक रेसिस्टरहरू भित्र आएपछि, एन्टेना आउटपुट र TP GND र TP1 परीक्षण पोइन्टहरूमा पीसी दांव स्थापना गर्नुहोस्। यसले पछि यी पोइन्टहरूमा जडान गर्न धेरै सजिलो बनाउँदछ।
अर्को, trimpots VR1-VR3 र पीसी माउन्ट आरसीए सकेट स्थापना गर्नुहोस्। डीसी सकेट, डायोड D1 र ZD1 त्यसपछि प्लगप्याक-संचालित संस्करणको लागि सम्मिलित गर्न सकिन्छ।
क्यापेसिटरहरू अर्कोमा जान सक्दछन्, सही ध्रुवीयताको साथ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रकारहरू स्थापना गर्न सावधानी राख्दै। NP (गैर-ध्रुवीकरण गरिएको) वा द्विध्रुवीय (बीपी) इलेक्ट्रोलाइटिक प्रकार जुनसुकै तरीकाले स्थापना गर्न सकिन्छ। उनीहरूलाई माउन्टिंग प्वालहरूमा तल तान्नुहोस्, ताकि तिनीहरू पीसी बोर्डको १ 13 मिमि भन्दा बढीमा बस्दैनन् (यो ADA ब्याट्रीहरू पीसी बोर्ड मुनिको बक्समा माउन्ट भएको बेला ढक्कन ठीकसँग फिट हुन अनुमति दिन हो)।
सिरेमिक क्यापेसिटरहरू पनि यस चरणमा स्थापना गर्न सकिन्छ। तालिका २ ले तिनिहरूको मार्किंग कोडहरू देखाउँदछ, तपाईलाई मानहरू पहिचान गर्न सजिलोको लागि।
चित्र ले Coil L7 का लागि घुमाउरो विवरणहरू देखाउँदछ। यसले ०. 1 मोडको २. turns मोड सम्मिलित गर्दछ - १ मिमी इम्मालेड तामाको तार (ECW) घावमा ट्याप गरिएको कुण्डलीमा पुरानो F2.5 फेराइट स्लग लगाएको। वैकल्पिक रूपमा, तपाईले कुनै पनि व्यावसायिक रूपमा बनाईएको २. turns मोड परिवर्तनशील कोइलिको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
दुई प्रकारका फर्मरहरू उपलब्ध छन् - एउटा २-पिन आधारको साथ (जुन सिधा पीसी बोर्डमा सोल्डर गर्न सकिन्छ) र एउटा जुन बेस बिना नै आउँदछ। यदि पहिलेको आधार छ भने, यसलाई पहिले २ मिलिमिटरले छोट्याउनु पर्छ, ताकि यसको समग्र उचाई (आधार सहित) १mm मिमी छ। यो राम्रो दाँतको ह्याकसा प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ।
त्यो भयो, कुण्डली हावा, पिनमा सिधा अन्त्य गर्नुहोस् र कुयललाई स्थितिमा सोल्डर गर्नुहोस्। नोट गर्नुहोस् कि मोडहरू एक अर्कासँग नजिक छन् (जस्तै, कुण्डली नजिकको घाउ हो)।
यस फोटोले केस कसरी ड्रिल गरिएको छ भनेर देखाउँदछ आरसीए सकेट्स, पावर सकेट र एन्टेना नेतृत्व लिन।
वैकल्पिक रूपमा, यदि पहिलेको आधार छैन भने, एक छेउमा कलर काट्नुहोस्, त्यसपछि पीसी बोर्डमा प्वाल L1 स्थितिमा ड्रिल गर्नुहोस् ताकि पूर्व कडा फिट हो। त्यो भयो, भूतपूर्वलाई यसको प्वालमा धकेल्नुहोस्, त्यसपछि कुण्डल हावाउनुहोस् कि तल्लो तल्लो घुमाउरो बोर्डको शीर्ष सतहमा बस्दछ।
पिसि बोर्डको सुराकी लिनु अघि तारको अन्त्यबाट इन्सुलेशन टाढा पक्का गर्नुहोस्। सिलिकॉन सीलेन्टको केहि ड्याब्स त्यसपछि कुण्डलको पूर्वमा रहन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अन्त्यमा, फेराइट स्लग पूर्वमा घुसाउन सकिन्छ र स्क्रु गर्न सकिन्छ ताकि यसको माथिको भाग पूर्वको शीर्षको साथ फ्लशको बारेमा छ। स्लगमा स्क्रु गर्न उपयुक्त प्लास्टिक वा पीतल पign्क्तिबद्ध उपकरण प्रयोग गर्नुहोस् - साधारण स्क्रू ड्राईभरले फेराइटलाई क्र्याक गर्न सक्दछ।
क्रिस्टल X1 अब स्थापना गर्न सकिन्छ। यो पहिले यसको नेतृत्वलाई degrees ० डिग्रीले झुम्काएर माउन्ट गरिएको छ, कि यो दुई छेउछाउका १०kΩ प्रतिरोधकहरू (तस्विर हेर्नुहोस्) को बीचमा तेर्सो रूपमा बस्छ। बोर्ड असेंबली अब DIP स्विच, ट्रान्जिस्टर Q90, नियामक (REG10) र एन्टेना नेतृत्व स्थापना गरेर पूरा गर्न सकिन्छ।
एन्टेना केवल एक आधा तरंग द्विध्रुवीय प्रकार हो। यसमा इन्सुलेटेड हुकअप तारको १.m मीटर लम्बाइ हुन्छ, एन्टेना टर्मिनलमा एक छेउ सोल्डर गरिएको छ। जहाँसम्म प्रसारण दायरासँग सम्बन्धित छ यसले राम्रो परिणाम दिनेछ।
केसको तयारी गर्दै
ध्यान अब प्लास्टिकको केसमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यसको लागि एक छेउमा प्वालहरू आरसीए सकेटहरू समायोजन गर्नका साथै अर्को छेउमा एन्टिना सिसा र डीसी पावर सकेट (यदि प्रयोग गरिएको छ भने) को लागी प्वालहरू हुन्छन्।
थप रूपमा, पावर स्विचको लागि एउटा प्वालमा प्वाल पार्नुपर्दछ।
सर्किट4x 1.5V AAA कक्षहरूबाट संचालित गर्न सकिन्छ यदि तपाईं एकाई पोर्टेबल बनाउन चाहनुहुन्छ भने। नोट गर्नुहोस् कि ब्याट्री होल्डरलाई केसको भित्र सबै चीज फिट गर्नको लागि केही परिमार्जन आवश्यक पर्दछ (पाठ हेर्नुहोस्)।
पीसी बोर्ड फिट गर्नको लागि केसको भित्तामा भित्री किनार मोल्डिंगहरू बक्सको माथिल्लो किनारा मुनि १mm एमएम गहिराईसम्म पनि हटाउनु आवश्यक छ। हामीले यसलाई हटाउनको लागि एउटा तेज छेनी प्रयोग गर्‍यौं तर यसको सट्टामा सानो ग्रिन्डर प्रयोग गर्न सक्दछौं। त्यो भयो, तपाईले RCD र DC सकेटको शीर्ष खाली गर्न ढक्कनको अन्त पट्टिहरू पनि हटाउनु पर्छ। अगाडि प्यानल लेबल त्यसपछि ढक्कनमा जोड्न सकिन्छ।
ब्याट्री द्वारा संचालित संस्करणको बक्समा उल्टो AAA सेल-होल्डर छ, पीसी बोर्डको तामाको छेउमा सम्पर्क राखी धारकको आधार संग। यस होल्डर र पीसी बोर्डको लागि निम्न प्रोभिसोहरूको साथ केस भित्र माउन्ट गर्न पर्याप्त ठाउँ छ।
(१) पावर स्विच S1 बाहेक सबै भागहरू पीसी बोर्डको सतह माथि १mm मिलिमिटर भन्दा माथि फैलनु हुँदैन। यसको मतलव इलेक्ट्रोलाइटिक क्यापेसिटरहरू पीसी बोर्डको नजिकै बस्नुपर्दछ र L5 को पूर्व सही लम्बाइमा काट्नु पर्छ।
(२) AAA सेल होल्डर १ मिलिमिटर धेरै मोटा छ र प्रत्येक अन्तमा तल फाइल गर्नुपर्दछ, ताकि कक्षहरू धारकको माथि थोरै माथि फैलिन्छन्।
()) आरसीए सकेटको शीर्षमा पनि थोरै सेभिंगको आवश्यकता पर्न सक्छ, ताकि सम्मेलन पछि बाकस र ढक्कन बीचमा कुनै अन्तर नहोस्।
यो एफएम प्रसारण ब्यान्ड स्टेरियो ट्रान्समिटर अस्ट्रेलियाई संचार प्राधिकरण द्वारा जारी गरिएको रेडियोकोम्यूनिकेशन्स कम हस्तक्षेप सम्भावित उपकरण (LIPD) कक्षा इजाजत पत्र २००० लाई पालना गर्न आवश्यक छ।
विशेष रूपमा, प्रसारणको फ्रिक्वेन्सी १० MW को EIRP (समतुल्य isotropically रेडिएटेड पावर) मा 88-108MHz ब्यान्ड भित्र र FM मोडुलन १ 10०kHz ब्यान्डविथ भन्दा बढि हुनुपर्दछ। प्रसारण लाइसेन्स क्षेत्र भित्र कार्यरत रेडियो प्रसारण स्टेशन (वा रिपीटर वा अनुवादक स्टेशन) को समान आवृत्तिमा हुनु हुँदैन।
थप जानकारी पाउन सकिन्छ www.aca.gov.au वेब साइट।
LIPDs का लागि क्लास इजाजत पत्र जानकारी यसबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ:
परीक्षण र समायोजन
यो अंश वास्तविक खाजा हो। पहिलो काम भनेको L1 लाई ट्युन गर्नु छ ताकि RF थरथर दायाँ सही दायरा माथि संचालन गर्दछ। त्यसो गर्नका लागि यस चरण-देखि-चरण प्रक्रिया अनुसरण गर्नुहोस्:
(१) DIP स्विचको प्रयोग गरेर प्रसारण फ्रिक्वेन्सी सेट गर्नुहोस्, तालिका १ मा देखाइए जस्तै, नोट गर्नुहोस् कि तपाईंलाई एउटा आवृत्ति चयन गर्नु आवश्यक छ जुन तपाईंको क्षेत्रमा वाणिज्यिक स्टेशनको रूपमा प्रयोग गरिएको छैन, अन्यथा हस्तक्षेप समस्या हुनेछ।
(२) TP GND मा तपाइँको मल्टिमेटरको साधारण लीड र आईसी2को 8 पिन गर्न यसको सकारात्मक नेतृत्व जडान गर्नुहोस्। मीटरमा डीसी भोल्ट दायरा चयन गर्नुहोस्, माइक्रोमिटरमा शक्ति प्रयोग गर्नुहोस् र जाँच गर्नुहोस् कि तपाईले readingV को नजीक पढ्न पाउनुभयो यदि तपाईं DC DC प्लग प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने।
वैकल्पिक रूपमा, मिटर ब्याट्री भोल्टेज देखाउनु पर्छ यदि तपाईं एएए सेलहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ।
()) TP3 मा सकारात्मक मल्टिमिटर लेड सार्नुहोस् र २V को पठनको लागि L1 मा स्लग समायोजित गर्नुहोस्।
ब्याट्री होल्डर पीसी बोर्ड मुनि केसको तल बस्दछ।
थर्राउने काम अब सहि गरीएको छ। L1 मा कुनै पनि थप समायोजनहरू आवश्यक पर्दैन यदि तपाईं पछि चयन गरिएको ब्यान्ड भित्र अर्को आवृत्तिमा स्विच गर्नुभयो। जहाँसम्म, यदि तपाईं अर्को ब्यान्डमा रहेको फ्रिक्वेन्सीमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ भने, L1 लाई TP2 मा 1V को पढ्नको लागि पढ्नुपर्नेछ।
Trimpots सेट गर्दै
चित्र .8: पूर्ण आकारको फ्रन्ट-प्यानल कलाकृति।
अब बाँकी सबै ट्रिमपट्स VR1-VR3 समायोजित गर्न को लागी संकेत स्तर र मोडुलन गहराई सेट गर्न को लागी हो। चरण-देखि-चरण प्रक्रिया निम्नानुसार छ:
(१) VR1, VR1 र VR2 तिनीहरूको केन्द्र स्थितिमा सेट गर्नुहोस्। VR3 र VR1 RCA μ सकेटको केन्द्रहरु को माध्यम बाट एक स्क्रू ड्राईभर पारित गरेर समायोजित गर्न सकिन्छ, जबकि VR2 समायोजित गर्न को लागी अगाडि movingF संधारित्र एक छेउमा सार्न सकिन्छ।
(२) ट्रान्समिटर फ्रिक्वेन्सीमा स्टेरियो एफएम ट्यूनर वा रेडियो ट्यून गर्नुहोस्। एफएम ट्युनर र ट्रान्समिटर सुरुमा दुई मिटर टाढा राख्नु पर्छ।
()) एक स्टीरियो स source्केत स्रोत (उदाहरणका लागि एक सीडी प्लेयर) आरसीए सकेट इनपुटहरूमा जडान गर्नुहोस् र जाँच गर्नुहोस् कि यो ट्युनर वा रेडियोबाट प्राप्त भयो।
फिगर .9: पीसी बोर्डको लागि पूर्ण आकारको नचिनेको ढाँचा।
())। स्टेरियो सूचक रिसीभरमा बाहिर नजाउन्जेल VR4 एन्टिकलॉकवाइज समायोजित गर्नुहोस्, त्यसपछि VR3 घडीको दिशाबाट यस स्थानबाट १ / 3th मा समायोजित गर्नुहोस्।
()) ट्युनरबाट उत्तम आवाजको लागि VR5 र VR1 समायोजित गर्नुहोस् - प्रत्येक समायोजन गर्न तपाईंले अस्थायी रूपमा संकेत स्रोत विच्छेदन गर्नुपर्नेछ। कुनै पृष्ठभूमि आवाज "हटाउन" पर्याप्त संकेत हुनु पर्दछ तर कुनै ध्यान विरूपण बिना।
विशेष गरी नोट गर्नुहोस् कि VR1 र VR2 प्रत्येक समान स्थितिमा सेट गरिएको हुनुपर्दछ, बाँया र दायाँ च्यानल सन्तुलन कायम गर्न।
त्यो हो - तपाईंको नयाँ स्टेरियो एफएम माइक्रोमिटर कार्यको लागि तयार छ।
तालिका २: क्यापेसिटर कोडहरू
तालिका:: रेजिस्टर रंग कोड
सं मूल्य --ब्यान्ड कोड (१%) --ब्यान्ड कोड (१%)
1 २२kΩ रातो रातो सुन्तला खैरो रातो रातो कालो रातो खैरो
8 २२kΩ खैरो कालो सुन्तला खैरो खैरो कालो कालो रातो खैरो
1 २२kΩ हरियो खैरो रातो खैरो हरियो खैरो कालो खैरो खैरो
2 २२kΩ सुन्तला सुन्तला रातो खैरो सुन्तला सुन्तला कालो खैरो खैरो
1 100Ω खैरो कालो खैरो खैरो खैरो कालो कालो कालो खैरो
1 56Ω हरियो निलो कालो खैरो हरियो निलो कालो सुनको खैरो
2 39Ω सुन्तला सेतो कालो खैरो सुन्तला सेतो कालो सुनको खैरो
१ पीसी बोर्ड, कोड 1, 06112021 78 x 50० मिमी।
१ प्लास्टिक उपयोगिता बक्स, x 1 x x 83 x mm१ मिमी
१ फ्रन्ट प्यानल लेबल, x x x mm mm मिमी
१ .1..7.6 मेगाहर्ट्ज वा .7.68..XNUMX मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल
१ एसपीडीटी सबमिनिचर स्विच (जयकार एसटी -०1 ००, अल्ट्रोनिक्स एस १0300१ or वा समकक्ष) (S1415)
२ पीसी-माउन्ट आरसीए सकेट्स (स्विच) (अल्ट्रोनिक्स पी ०२०,, जयकार PS ०2 0209 ०)
१ २.mm मिमी पीसी-माउन्ट DC पावर सकेट
१--वे DIP स्विच
१ २. turns परिवर्तन भेरुकोल (L1)
१ 1mm F4 फेराइट स्लग
१ 1० एनएच (०..680μμ एच) सतह माउन्ट इन्डक्टर (१२१० ए केस) (फारनेल 0.68०1210-२608२ वा यस्तै)
१ n 1nH सतह माउन्ट इन्डेक्टर (०68०0603 केस) (Farnell 323२7886-XNUMX or वा समान)
१ मिलिमिटर लम्बाई १ मिमी इम्मेलेड तामाको तार
०.1 मिमी टिन गरिएको तामाको तारको १ mm० मिमी लम्बाई
हुकअप तारको १ 1 मीटर लम्बाई
PC पीसी दांव
१ x x एएए सेल होल्डर (ब्याट्री अपरेशनको लागि आवश्यक)
A AAA कक्षहरू (ब्याट्री अपरेशनको लागि आवश्यक)
3 10kΩ ठाडो trimpots (VR1-VR3)
१ BH1F रोहम सतह माउन्ट एफएम स्टेरियो ट्रांसमिटर (आईसी १)
१ 1L78 कम-शक्ति नियामक (REG05)
१ MPSA1 डार्लिंगटन ट्रान्झिस्टर (Q13)
१ ZMV1ATA वा MV833 (VC2109)
१ 1V 24W जेनर डायोड (ZD1)
१ १ एन 1 १1, १ एन 914१1 डायोड (D4148)
२ 2μF 100VW पीसी इलेक्ट्रोलाइटिक
२ 5μF 10VW पीसी इलेक्ट्रोलाइटिक
२ १μF द्विध्रुवीय इलेक्ट्रोलाइटिक
२ १μF १VVW इलेक्ट्रोलाइटिक
१ 1nF (.47F) MKT पॉलिएस्टर
२ १०nF (.2μF) सिरेमिक
१ 3nF (.2.2F) MKT पॉलिएस्टर
१ 1०pF सिरेमिक
१ 2०pF सिरेमिक
resistors (०.२0.25 डब्ल्यू, १%)
१ २२kΩ १ १००Ω
२2केΩ
प्रसारण फ्रिक्वेन्सीहरू M 87.7..88.9 मेगाहर्ट्ज देखि .0.2 XNUMX..XNUMX मेगाहर्ट्ज XNUMXMHz चरणहरूमा
१०106.7.M मेगाहर्ट्जदेखि १०107.9..0.2 मेगाहर्ट्ज ०.२ मेगाहर्ट्ज चरणमा (१ total कुल)
कुल Harmonic विकृति (THD) सामान्यतया ०. 0.1%
पूर्व जोर सामान्यतया ms० मि
कम पास फिल्टर १kkHz / २०dB / दशक
च्यानल विभाजन सामान्यतया d०dB
च्यानल ब्यालेन्स 2dB भित्र (trimpots संग समायोजित गर्न सकिन्छ)
पायलट मोडुलन 15%
आरएफ आउटपुट पावर (EIRP) सामान्यतया १०μW जब inbuilt attenuator प्रयोग गर्दै
आपूर्ति भोल्टेज 4-6V
वर्तमान आपूर्ति २m एमए 28V मा
अडियो इनपुट स्तर 220mV RMS अधिकतम 400Hz र 1dB कम्प्रेसन सीमित
तपाईले यस लेखमा उल्लेख गरिएका उत्पादनहरू यहाँ खरीद गर्न सक्नुहुन्छ:
ST0300: SUB-MINI TOGGLE SPDT विक्रेता ट्याग थ्रेड
निम्न डाउनलोडहरू यस लेखका लागि उपलब्ध छन्:
माइक्रोमिटर फ्रन्ट प्यानल (पीडीएफ)
माइक्रोमिटर पीसीबी (पीडीएफ)
माइक्रोमिटर फ्रन्ट प्यानल (ZIP)
माइक्रोमिटर पीसीबी (ZIP)